Zava-pisotro amin’ny akondro sy voanio, mampitony rarintsaina…izao atao!
Ny adin-tsaina no isan’ny manimba ny fahasalamana voalohany indrindra. Raha te ho salama dia tokony hiezaka handanjalanja izany, araka izay azo atao.
Ankoatra ny fialam-boly, ny fanaovana fanatanjahan-tena, izay fomba hahafahana misoroka ny adin-tsaina dia manampy ihany koa ity ranom-boankazo vita amin’ny akondro sy ranom-boanio ity.
Akora ilaina (ho an’olon-droa)
- Akondro tsy de masaka be loatra 3
- Ranona voanio (lait de coco) 25 cl
- Azo ampiana vovoka kanelina
Tetehina ny akondro ary alefa anaty « mixeur » miaraka amin’ny ranona voanio.
Afangaro amin’ity fitaovana ity mandra-pahazo ranom-boankazo mitovy loko tanteraka.
Araraka ao anaty vera ary rarahana kanelina raha ilaina izany.Sotroina mangatsiaka tsara.
Samy manan-karena otrikaina ny voanio sy ny akondro. Samy ahitana vitamina B, potasiôma, kalsiôma, magneziôma ary Fer ao anatin’ireo voankazo 2 ireo. Ireo singa ireo dia samy mampatanjaka sy mampavitrika ny vatana. Rehefa mavitrika kosa ny vatana dia mahatohitra tsara ny adin-tsaina.